Vaovao momba ny indostria LED |
Ny fampisehoana LED miolaka dia tsy mitovy amin'ny fiaramanidina nentin-drazana nentin-drazana, afaka mifanaraka tsara amin'ny tontolon'ny fametrahana izy ireo ary mifangaro tanteraka amin'ny tontolon'ny fametrahana. Izy ireo dia afaka mamolavola miaraka amin'ny radian samy hafa arakaraka ny fametrahana tontolony samihafa, mifanaraka tanteraka amin'ny ...
Ny vidin'ny akora dia miakatra ary hitohy
Vao tsy ela akory izay, ny jiro hazo Fujian Linsen, atsinanana mankany Hongye, Morgan Electronics, Hai Le Electronics ary orinasa maro hafa PCB dia namoaka ny vidin'ny birao PCB, saika nitombo 10% avokoa. Tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay, Shandong Jinbao, Kingboard, Mingkang, fanjakana Weili, Jin Anguo ary orinasa maro hafa dia ...
Iza no anjara asan'ny tontonana manokatra eo anoloana ivelany P5?
Ny tontolon'ny tarika ivelany dia mitana andraikitra lehibe amin'ny tsenan'ny rindrina tarihintsika. Mila mitandrina tsara amin'ity tsena ity isika rehefa nahazo baiko avy any ivelany. Fa maninona no tontonana ivelany manana anjara lehibe eo amin'ny tsena? Tsy hoe satria mihabe ny olona mampiasa azy io fa tsy ny carte de vie na LCD fa ...